धमाधम बिहे गर्दै नेपाली नायिका, हेर्नुस् कसले को संग बिहे गरे ? – Sidha Kura
मुख्य पृष्ठ /मनोरंजन/धमाधम बिहे गर्दै नेपाली नायिका, हेर्नुस् कसले को संग बिहे गरे ?
यो बर्षको सुरुवात संगै धमाधम नायिकाहरुको बिबाह भैरहेको छ । तर सबै गुपचुपमा । यतिसम्मकी बिबाहको तस्बिरहरु उनै नायिकाहरुले शेयर गरेपछी मात्र फ्यानहरुले थाहा पाए ।
१. रेखा थापा –
अभिनेत्री रेखा थापाले बिबाह गरेकी छिन । रेखाले जाजरकोट स्थायी घर भएका बलराम शाहीसँग विवाह गरेकी हुन् । प्राप्त जानकारी अनुसार अघिल्लो साता उनीहरुले कानुनी बिबाह गरेका हुन् ।
बुझ्नमा आए अनुसार बलराम शाही लामो समयदेखि इजरायलमा बसोबास गर्ने गरेका छन् । केही समय देखि रेखा र बलराम प्रेममा थिए । रेखाले अर्को वर्षको शरुमै बिहे गर्ने संकेत यसअघि नै गरेकी थिइन । त्यसो त बलराम पर्यटन व्यवसायी भएका जनाइएको छ ।
२. केकी अधिकारी –
अभिनेत्री केकी अधिकारीले प्रेमी रोहित तिवारीसँग विवाह गरेकी छन् । काठमाडौंको धापासीस्थित ग्रान्डी भिल्ला अपार्टमेन्टमा उनले विवाह गरेकी हुन् । परिवारका सदस्य र निकट आफन्त तथा साथीहरुको उपस्थितिमा उनीहरुको विवाह कार्यक्रम सम्पन्न भएको हो ।
उनले बिबाह बन्धनमा बाँधिएकी खबर सामाजिक सञ्जाल मार्फत सार्बजनिक गर्दै बिबाह बन्धनमा बाँधिएको जानकारी दिएकी थिईन । रोहित हाम्रो बजार डटकमका सिईओ हुन् भने फोर्ब्सको एसियाका ३० बर्ष मुनिको धनाड्यहरुको सुचीमा समेत पर्न सफल ब्यक्ति हुन् ।
उनको स्टाटस्ः आजका दिनसम्म मलाई कलाकारको रूपमा दिनु भएको माया, सद्भाव र समर्थन प्रति हार्दिक आभारी छु। मेरा हरेक उतार चढावको साक्षी बन्नु भएका मेरा प्रिय दर्शकहरुसॅंग मेरो विवाहको शुभ समाचार बाढ्न पाउँदा अत्यन्तै हर्षित छु। जीवनको नँया अध्याय सुरू गर्दै गर्दा म र मेरो जिवनसाथीले उपहार स्वरूव यहाहरूको आशिर्वादको अपेक्षा गरेका छौँ। यहाँहरूको माया, साथ र सद्भाव हामी प्रति सदैव कायम रहने कुरामा हामी विस्वस्त छौँ।
३. वर्षा सिवाकोटी –
अभिनेत्री वर्षा सिवाकोटीले शुक्रबार बिहे गरेकी छन्। उनले शुक्रबार आफ्नो सामाजिक सञ्जालमार्फत् यसबारे जानकारी दिएकी हुन्।
वर्षाले आफ्ना परिवार र निकट साथीहरूको उपस्थितिमा आशिषसँष बिहे गरेको जानकारी फेसबुकमार्फत् दिएकी हुन्। यसबाहेक उनले आफ्नो बिहे र श्रीमानबारे अरू विवरण खुलाएकी छैनन्। तर उनले अमेरिका बस्ने आशिष गेलालसँग बिहे गरेको बताइएको छ। आशिष अमेरिकामा बस्छन् ।
उनले लेखेकी छन्- हामीले परिवार र निकट साथीहरूका माझमा २०२२ अप्रिल २२ मा बिहे गरेको खबर सार्वजनिक गर्न पाउँदा खुसी लागेको छ। हामी नयाँ जीन्दगीको सुरूआत गर्न गइरहेका छौं। तपाईंहरू सबैले दिएको माया र सहयोगका लागि धेरै धन्यवाद। सप्रेम- आशिष र वर्षा।
४. ज्योत्सना योगी –
फ्यानहरुलाई सरप्राइज दिँदै नायिका ज्योत्सना योगीले पनि आफ्ना प्रेमि स्वप्न सुमनसँग लगनगाँठो कसिन । कमलपोखरीको एउटा होटलमा आयोजित सानो समारोहमा परम्परागत तवरबाट उनीहरुले लगनगाँठो कसेका थिए ।
४ वर्षदेखि रिलेसनसीपमा रहे पनि उनीहरु सार्वजनिक रुपमा खुलेका थिएनन् । स्वप्न सुमनले एकाएक विवाहको तस्वीर सामाजिक सञ्जालमा हालेपछि मात्र उनिहरुको बिबाहको बारेमा थाहा भएको थियो । खैर, यी नायिकालाई अहिले बधाई र शुभकामना सन्देश लिन भ्याइनभ्याइ छ ।
जे होस् जसरी बिबाह गरेपनी त्यो ब्यक्तिगत मामिला हो । तरपनी सेलिब्रेटी भएकोले सबैले चासो राख्नु स्वभाबिक हो । सम्पुर्ण नव बिबाहित दम्पतीहरुलाई बैबाहिक जिवनको शुभकामना । दाम्पत्य जिवन सुखमय बनोस् ।
उमेर ढल्केपनि घटेको छैन करिश्माको सुन्दरता हेर्नुहोस् फोटोफिचर
बिहे गरेर पनि आमा बन्न नसेकेका वा नचाहेका यी चर्चित नायिकाहरु
विवाह गर्दैछन अभिनेता आकाश श्रेष्ठ, के उनले लगनगाठो कस्लान् त ???